को स्नेहन मध्यम मूल्य खण्ड मा सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरु को एक मोटर तेल ZIC 5W-30 कोरियाली चिन्ह हो। उपभोक्ताहरु किफायती मूल्य, सर्वोत्कृष्ट सूत्र र राम्रो प्रदर्शन स्नेहक उल्लेख गरे। वाहन को मर्मतका लागि निर्माता गरेको सिफारिसहरू अनुपालन - वाहन एकाइहरूको दीर्घकालीन सञ्चालनको आधार छ। प्रयोग सामाग्री एसके स्नेहक तपाईं सामना सक्छ सुविधाहरू, के हो, यो समीक्षा पढ्नुहोस्।
ZIC स्नेहक कोरियाई कम्पनी एसके स्नेहक द्वारा निर्मित छन्। यो समूह तेल को तेस्रो समूह को निर्माण र बिक्री मा माहिर। निर्मित उत्पादनहरु - एक उच्च चिपचिपाहट सूचकांक संग ईंन्धन र स्नेहक। को प्राविधिक प्रक्रियाको आधार विधिहरू ब्रान्ड catalytic hydrocracking छन्।
किनभने कोरियाली निर्माता आधुनिक प्रविधि, नवीन डिजाइन, अधिकतम संरचना सूत्र सामाग्री, व्यवसायीक र अनुभव को आर्सनलमा चिन्ता हुँदैन, मोटर तेल र अन्य वस्तुहरु गुणस्तर मा।
मोटर तेल ब्रान्ड को दायरा
ब्रान्ड ZIC कम्पनी अन्तर्गत एसके स्नेहक स्नेहक को एक किसिम को उत्पादन। निर्माण समयमा, कृत्रिम र अर्ध-कृत्रिम आधार सब्सट्रेट को प्रयोग। उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र Automakers को आवश्यकताहरु अनुपालन मा निर्मित।
दायरा इन्जिन तेल चिपचिपाहट 5w30 धेरै उत्पादनहरु समावेश:
X9, X9 रास र X9 FE;
डिजेल X7 र X7 रास;
विशेष उद्देश्य फरक tolerances, वर्ग र संरचना। दायरा सबैले एपीआई र ACEA फरक मा OEM-निर्माता समूह को आवश्यकताहरु बैठक उत्पादन पाउन सक्नुहुन्छ बीचमा।
छोटकरीमा, स्तर र tolerances
तेल ZIC 5W-30 - अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्नेहक। पेट्रोल र डिजेल इन्जिन लागि उत्पादन धेरै प्रकार प्रणाली एपीआई पालन:
एसएन / CF;
केही मोटर तेल ILSAC GF-5 को श्रेणी मा प्रमाणित गरिएको छ। को A1 / B1 देखि C3 गर्न: ACEA विशेष तरल पदार्थ को वर्गीकरण विभिन्न समूह मा अलग। उपभोक्ताहरु पूर्णतया उत्पादन स्नेहन को प्रकार मा वाहन निर्माता गरेको सिफारिसहरू पूरा हुनेछ जो लाइनहरु ZIC देखि तेल को सबै कि पाउनुहुनेछ।
उचित मूल्य, उचित गुणवत्ता स्नेहक निर्णायक खरीद मापदण्ड छैन। तेल ZIC 5W-30, धेरै धन्यवाद OEM-निर्माताहरु को tolerances भित्र मनपराएका:
फोर्ड मोटर कम्पनी;
पीएसए प्यूजिओट Citroën;
स्नेहक ZIC 5w30 राम्रो गुणस्तर द्वारा विशेषता, अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा र autoconcerns स्वीकार्य लागत र कारण प्रविधी निर्माण, विकास गर्न स्थिर सूत्र र प्रयोग विधि द्वारा पुष्टि।
आधार र additives
राम्रो इन्जिन तेल - उच्च गुणवत्ता आधार र additives को प्रभावकारी प्याकेज। Technologists वाहन को सञ्चालनको विभिन्न अवस्थामा, कम volatility इन्धन, पवरट्रेन घटक को शुद्धता प्रदान गर्न वेयर कम सुधार lubricity इष्टतम सूत्र विकास उत्पादनहरु ZIC।
विनिर्माण प्रक्रिया दुई आधारमा प्रयोग मोटर विशेष तरल सिर्जना गर्न। निर्माण स्थिर आधार एउटा मुख्य विधि - पेट्रोलियम उत्पादनहरु को hydrocracking। उच्च चिपचिपाहट सूचकांक, स्थिर आणविक संरचना संग संश्लेषण प्राप्त पदार्थ को समाप्तिमा।
antiwear, एंटीओक्सिडेंट, डिटर्जेंट: आधार तेल additives शुरू गर्दै छन् थर्मल स्थिरता, pumpability र lubricity सुधार गर्न। अन्तिम उत्पादन एंटिफिकेशन गुणहरू, वाष्पीकरण को स्वीकार्य गुणक, कम ugoraemostyu, उच्च चिपचिपाहट सूचकांक छ।
2015 मा, यो ZIC उत्पादनहरु अद्यावधिक गरिएको थियो। प्लास्टिक प्याकेजिङ्ग, सामान्य डिब्बे को सट्टा प्रयोग गरिन्छ counterfeiting विरुद्ध सुरक्षा को स्तर वृद्धि, र उपभोक्ताहरु धेरै सकारात्मक विशेषताहरु उल्लेख गरेका छन्:
आयोमी मात्रा उपस्थिति;
अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताहरु अनुपालनको;
तेल को स्थिरता;
additives को प्रभावकारिता;
सञ्चालन समयमा कम खपत;
को हिउँदमा आन्तरिक दहन इन्जिन को सजिलो सुरु।
तेल ZIC 5W-30 इन्जिन को कामकाज क्षीण छैन, सामाग्री को optimally सन्तुलनमा छन् शक्ति एकाइ सम्मेलन को operability को अवधि विस्तार। तर, सुरक्षा, counterfeited इन्धन को उच्च डिग्री बावजुद, त्यसैले ब्रान्ड उत्पादन मिश्रित समीक्षा प्राप्त गरेका छौं।
कमीकमजोरी भएको स्नेहन तरल पदार्थ को चयन प्रक्रिया त्रुटिहरू को मामला मा फेला परेन। इन्धन को सञ्चालन Automakers को सिफारिसहरू पूरा गर्दैन, र सेवा नियमहरु को उल्लंघन नकारात्मक आन्तरिक दहन इन्जिन को तंत्र असर गर्छ। नकारात्मक पक्षहरू जोगिन गर्न, यो मोटर तेल, वर्ग र tolerances को प्रकार को लागि उपयुक्त प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
प्रयोग र चयन को सुविधाहरू
इन्जिन लागि सही उत्पादन किन्न, तपाईं प्रकार मा निर्माताको सिफारिसहरू ध्यान, को स्नेहक चयन गर्नुपर्छ, चिपचिपाहट, वर्ग, आधार tolerances। विशेष लोकप्रिय उपभोक्ता तेल ZIC X7 5W-30, एक कृत्रिम आधार थपिएको प्याकेज प्रयोग गरेको छ, जो बीच। यो श्रृंखला डिजेल आन्तरिक दहन इन्जिन लागि कम खरानी विशेष तरल पदार्थ र स्नेहक समावेश छ।
छलफल स्नेहक श्रृंखला चोटी सामाग्री को सबै भन्दा प्रौद्योगिकी, उन्नत कुशल र इष्टतम संरचना। उत्पादन गुणस्तर को सख्त मापदण्डको, त्यसैले धेरै Automakers स्वीकृत गरिएको छ। विशेषता विचारशील सूत्र एकदम राम्रो प्रदर्शन।
तेल ZIC 5W-30 अर्द्ध-सिंथेटिक्स - X5। उत्पादन उल्लेखनीय मिलान स्तर SN, ILSAC GF-5, Dexos 1 पेट्रोल इन्जिन, निर्माता आधुनिक स्तर पूरा विशेष तरल पदार्थ प्रयोग गर्न सिफारिस जसको लागि अभिप्रेरित। सबैभन्दा powertrains लागि उपयुक्त जनरल मोटर्स।
ब्रान्ड ZIC सबै उत्पादनहरु लगातार कार्यका लागि डिजाइन छैन। नाली तेल पछि 7.5 हजार। किमी सिफारिस गरिएको छ। साथै, उत्पादन खपत गर्न peculiar, त्यसैले तपाईं स्नेहक को स्तर निगरानी गर्न आवश्यक छ।
तेल ZIC 5W-30 समीक्षा को विवादास्पद प्रकृति जित्यो। उपभोक्ताहरु धेरै सुविधाहरू उल्लेख छ:
उच्च चिपचिपाहट सूचकांक;
सञ्चालनको अवधिमा कम खपत;
ugoraemosti कम प्रतिशत;
इन्धन को नकारात्मक आकलन जालसाजी को बोध, अनुचित चयन, powertrains केहि प्रकारको अनुचित सूत्र को उच्च प्रतिशत को दृश्य मा प्राप्त, त्यसैले खरिद OEM-निर्माताहरु 'सिफारिसहरू कार संग तुलना, विशेषताहरु, माल को स्तर र tolerances जाँच्न गर्नुपर्छ अघि।
तपाईं चिरपरिचित स्नेहक ब्रान्डहरु को विशेषताहरु तुलना छ जो एक सस्तो र उच्च गुणस्तरीय मोटर तेल, देख रहे हो? ध्यान कोरियाली उत्पादन, ZIC 5w30 चिपचिपाहट छन् जो को समर्थन इन्जिन घटक को सञ्चालन गाह्रो छैन हालतमा। उचित चयन र यो ब्रान्ड को इन्धन को उचित सञ्चालन संग seminal तरल पदार्थ को लागि एक राम्रो प्रतिस्थापन हुन सक्छ।
टायर Goodyear EfficientGrip प्रदर्शन: मालिकको समीक्षा
टो ट्रक Zhulebino
अप्रिल 21 - रूसी चर्च र व्यावसायिक मा एक छुट्टी
एक डबल बॉयलर मा आलु, एरोग्रिल मा र एक आस्तीन मा। व्यञ्जनहरू।
निकल घनत्व र अन्य गुणहरू। निकल अयस्क
Siamese जोडाहरू Masha र Dasha Krivoshlyapovy: तिनीहरूले मृत्यु फैलाउन
यो बंध्यकरण बिना हिउँदमा खुबानी को compote तयार गर्न सम्भव छ? दुई तरिकामा एउटा प्रयोग:
Overheated ल्यापटप। यस्तो अवस्थामा के गर्ने?